Malabka Iyo Qorfaha Budada Ah Oo Daaweeya 15 Xanuun!! - Daryeel Magazine
Malabka Iyo Qorfaha Budada Ah Oo Daaweeya 15 Xanuun!!
Hadaba Waxa daraasado lagu sameeyey dalal kala duwan oo adduunka ah, kuwaas oo ay muddo dheer ku hawlanaayeen khubaro ku xeel dheer cilmiga xanuunada, daawooyinka iyo cilmi baarista la xiriira daawooyinka dabiiciga ah, waxa ay ku ogaatay in malabka iyo qorfaha oo uu mid waliba sidiisa daawo u yahay oo uu bogsiiyo xanuuno badan oo kala duwan kuwaas oo ku dhaca dadka noocyadiisa kala duwan, rag, dumar, waayeel iy caruur.
Daawadana waxa laga sameeyaa isku jir ka kooban malabka iyo budo qorfe la ridqay ah. Isla markaana waxa la xaqiijiyey in aanay daawada malabka iyo qorfuhu lahayn wax dhibaato daawo ah (medicines side effects), sababta oo ah waa wax dabiici ah oo aan kimiko ku jirin ama aan laga samaynin.
Sidaan waxa ogolaaday oo aqoonsaday culimada caafimaadka iyo daawooyinka ee dalalka caalamka kuwooda ugu caansan. Sidaa darteed ,waxa aaynu halkan idiinku soo gudbinaynaa cudurada lagu daaweeyo dawada malabka iyo budada qorfaha laga sameeyo. Waxaana ka mida Xanuunada wadnaha, Xubno xanuunka, Hargabka iyo ifilada, Calool qushqushka, Xoojinta difaaca jirka, Daalka, Af qarmuunka Finanka wejiga, gaaska, dhimista miisaanka jirka, , cholesterol-ka, Cuna xanuunka, suuska ilkaha iyo infekshanada kaadi haysta iyo qaar kale oo badan.
Akhriso: faaidooyinka caafimaad ee malabka
Hargabka: saynisyahannada dalka Spain ayaa cadeeyay in malabka ay ku jirto maado dabiici ah oo disha bakteeriyada hargabka dhalisa.
Xubno Xanuunka (Arthritis): cilmi baaris ay samaysay jaamacada Copenhagen ayaa lagu ogaaday in malabka iyo qorfuhu ay daaweeyaan cudurka bararka laalabooyinka jirka ee loo yaqaan Arthritis. Tijaabadaan ayaa lagu sameeyay 200 oo qof oo qabay xanuunka Arthritis-ka, iyadoo bukaanka la siiyanayay malab iyo qorfe subax kasta quraacda ka hor waxaana ku caafimaaday 73 ka mid ah dadkaasii mudo bil gudaheed. Bukaanadaan oo intooda badani horay aan u awoodin inay soocdaan ayaa markii dambe bilaabay socodka iyagoo aan dareemayn wax xanuun ah.
Xanuunada wadnaha: Isku qaso malab iyo qorfe budo ah, rooti ku cun, si joogto ahna ugu quraaco. Waxay hoos u dhigaysaa cholesterol-ka waxayna kaa badbaadin kartaa wadne istaaga. Malabka iyo qorfaha oo si joogta ah loo isticmaalo waxay xoojisaa garaaca wadnaha.
Af-urka: Dadka ku nool South America, waxaa caado u ah inay subaxii marka ay soo kacaan ay ku luqluqdaan malab, qorfe budo ah oo lagu qasay biyo qandac ah si afkoodu usoo carfo maalinta oo dhan. Qorfaha waxaa uu la dagaallamaa bakteeriyada sababta huurada iyo weliba dhagaxaanta qumanka tasoo keenta af urka.
Finanka: 3 qaado oo malab ah iyo 1 qaado qorfe budo ah ayaa la isku qasaa kadibna waa la marsadaa ka hor intaanan la seexan, subiixina biyo qandac ah ayaa la iskaga mayraa. Hadii sidaan la sameeyo mudo 2 toddoobaad ah finanka oo dhan way baaba’ayaan.
Gaaska: si ay muujiyeen daraasado lagu sameeyay wadamada India iyo Japan, malabka iyo qorfaha budada ah oo la cunaa waxay daaweeyaan gaaska caloosha.
Ifilada: dadka qaba ifiladawaxaa haboon inay qaataan 1 qaado oo malab qandac ah iyo qaado barkeed qorfe budo ah mudo saddex maalmood ah. Sidaani waxay kaa bogsiinaysaa qufaca, hargabka, waxayna kuu nadiifiinaysaa sanqada, waana macaan!!
Dhimista miisaanka jirka: Malabku waxaa ku jira antioxidants iyo enzymes dhimaa miisaanka jirka ama cayilka. Sidoo kale qorfuhu waxaa uu caawiyaa luminta miisaanka.
Isticmaal malab iyo qorfe budo ah oo lagu karkariyay koob biyo kulul ah, subax kasta nus saac ka hor quraacda calooshaada oo maran iyo habeenkii inta aadan seexan ka hor. Sidaani waxay yaraysaa cayilka, dadka buurana waxay ka ilaalisaa in miisaanka kale ku kordho xitaa haday isticmaalaan calories badan
Isku Daaweynta Qorfaha
Malabka Iyo Uurka